Omuma Rust mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Omuma Nchara mbanye anataghị ikike
Rust Hacks, Aimbot, no recoil, ESP, Wallhacks & Ọzọ
Enweta ohere anyị dị ịtụnanya nchara Ochie mbanye anataghị ikike maka otu ala price! Zụta Igodo nke ụbọchị 1 taa.
Ikwesighi ịnọ naanị otu ụbọchị mgbe gị na anyị na-arụ ọrụ. Zụta Igodo Ngwaahịa Otu Izu!
Na-achọ ịghọ onye a kwadoro na onye Gamepron? Yourselfzụrụ onwe gị 1-ọnwa Product Key taa!
Nchara Omuma mbanye anataghị ikike Ozi
Egwuregwu ịlanarị na-ejedebe ụzọ ole dị iche iche ị nwere ike igwu, n'agbanyeghị nchara dị iche n'okwu ahụ. Nwere ike ịhọrọ wuo a isi na ndị enyi gị ma ọ bụ ike ike ihe dị ka a solo, na obere bit nke PvP ẹsịn ke mix maka ezigbo ihe! Enwere otutu ihe iji mezuo ya mgbe ị na-egwu nchara, na iji nchara nchara mbanye anataghị ikike ga-eme ka usoro ahụ dị mfe! Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị egwuregwu ga-etolite ma sie ike karịa ma e jiri ya tụnyere, ha agaghị enwe ike ịmị ọkụ ọkụ nke aghụghọ anyị.
Windo 10 (1903 ~ 20H2)
Ihe nlere anya gụnyere Enemy ESP, Enemy Info, Resource ESP (Ores, Stashes, Caches, Crates, wdg) na ndi ozo! Ga-ahụ Spiderman Mod na enweghị ngbanwe ọ bụla n'ime ya, yana Rust Aimbot nke na-enye Ebumnuche Na-agbanwe agbanwe / Ebumnuche (yana Ebumnuche Ebumnuche na Anya) na FOV Circle.
Onye Iro ESP (Igbe)
Ama onye iro (Ogwe ahụike, aha, ebe dị anya)
ESP (Ores, stashes, crates, wdg)
Configurable Ebumnuche Key
Aimbot na amụma
Onye Spiderman mod
Dị ka aha “Omuma” ga-atụ aro, nke a bụ ngwá ọrụ na nke ahụ bụ zuru okè n'ihi na ndị na-amasị na-ihe dị mfe mgbe hacking. E nwere ọtụtụ nke elu atụmatụ gụnyere n'ime, ọ bụ ezie na ha na-ada n'otu uzo nke omenala nchara Hacks. Ndị aghụghọ bụ iyi-àmà, nke pụtara na ị nwere ike enuba niile ị ga-amasị mgbe n'ịghọ aghụghọ ule; ọ bụ mpụga ngwá ọrụ na-adịghị achọ ka ọtụtụ set-elu. Ọ bụ ezie na ị nwere ike igwu naanị na Window Window, anyị Rust Classic Hack na-abịa na HWID Spoofer maka ndị ọrụ amachibidoro na mbụ! Nwere ike iji kpuchie ntọala gị niile na Gamepron na Rust Omuma anyị.
Gini mere iji jiri Rust Classic kari ndi ozo?
Rust bụ egwuregwu na-achọsi ike ma a bịa n'ụdị nkà ị na-egwu, ọ bụkwa ya mere ndị egwuregwu na-ejighị egwu egwu na-eleghara anya. Ma ị nọ na-egwuri egwu ogologo oge ma ị nwetabeghị nsonaazụ kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ na ị na-amalite, iji Rust Classic Cheat ga-etinye gị n'ọnọdụ nke ọma. Ọ baghị uru n ’ụdị egbe ndị egwuregwu ndị ọzọ nwere, ma ọ bụ ọbụlagodi etu esi wuo ntọala ha - yana ụdị nke anyị Rust Classic Hack iji dabere, ọ nweghị ihe ga - egbochi gị imezu ebumnuche gị. Can nwere ike ịwakpo ndị egwuregwu ndị ọzọ mgbe ị chọrọ.
Anyị in-game menu bụ nnọọ kensinammuo otu, dị ka ị pụrụ ịbụ kpọmkwem dị ka ị ga-amasị gị mbanye anataghị ikike ntọala. Nchịkọta nhọrọ anyị na-agba nchara na-enye gị ohere ịgbanwe Limkè Dị Anya nke aimbot gị, ma ọ bụ ọbụlagodi etu ị chọrọ wantta Aimbot si arụ ọrụ; ị nwere ike họrọ aka (ma ọ bụ gbanyụọ) ụfọdụ ESP nhọrọ dị ka nke ọma. Nwere ike hazie gị experiencegba Cha Cha ahụmahụ na-na-game menu awa na anyị nchara Omuma mbanye anataghị ikike, na ọ bụ nnukwu ihe mere ọtụtụ ndị ọrụ na-alaghachi Gamepron n'ihi na ha niile hacking mkpa. Mgbe ị nwere ike ịtụgharị na uche gị, ị ga-emerịrị.
A6. Mba, aghụghọ a na - arụ ọrụ na windo.
Nnweta 1 Ọnwa>
Njikere Na-achị na anyị nchara Omuma Hack?